Free online ọrụ. Mgbako oyiyi akwa
Mgbako oyiyi akwa
Mgbako oyiyi akwa 1
Dayameta nke valvụ, mm
Na ogologo nke mkpara, mita
Number nke ọnụ
Ego kwa ton
Mgbako mkwado 2
Total arọ valves, n'arọ
Ndị na-eri kwa ton
Ngụkọta oge nke mkwado
Gbakọọ ngụkọta arọ nke mkwado, ya n'ozuzu ya olu na ibu ibu nke otu mita nke rebar.
Site mara dayameta na ogologo nke mkwado.
Mgbako oyiyi akwa 2
Gbakọọ ngụkọta ogologo nke mkwado, ya akporo na ọnụ ọgụgụ nke ndị rebars, arọ nke otu mita na otu mkpara.
Site mara dayameta na ngụkọta arọ nke valvụ.
The ngụkọta oge dabeere na ibu ibu nke otu cubic mita ígwè 7850 n'arọ.
Ngụkọta oge nke armature maka ụlọ ewu
Mgbe na-ewu ụlọ dị ezigbo mkpa gbakọọ ego nke mkwado maka ntọala. Iji mee nke a, ị ga-enyere anyị omume. Iji mgbako valves ike, ebe ọ maara na arọ na ogologo nke mkpanaka mara ngụkọta arọ gị mkpa mkwado, ma ọ bụ ndị a chọrọ ọgụgụ nke mkpara na ha n'ozuzu ogologo. Ndị a data ga-aka ngwa ngwa na-adị mfe gbakọọ ego nke mkwado chọrọ ịrụ arụ ọrụ gị.
Ngụkọta oge nke oyiyi dị iche iche dị na ụdị ntọala
Gbakọọ armature ga-mara ụdị nke ntọala na ụlọ. N'ebe a, e nwere abụọ nkịtị variants. Nke a slab na warara ntọala.
Oyiyi akwa maka slab ntọala
Slab ntọala na-eji ebe Ìgwè Ona mkpa iji wụnye arọ ụlọ mere nke ihe ma ọ bụ Adobe na nnukwu uka ihe uko ụlọ. Ke idaha ntọala na-achọ mkwado. Ọ bụ na e mere ìgwè abụọ, onye ọ bụla nke mejupụtara abụọ n'ígwé nke mkpara ndokwa perpendicular ọ bụla ọzọ.
Tụlee ihe banyere ngụkọta oge nke mkwado maka slabs, n'akụkụ ogologo 5 mita. Ume mkpara na-enịm na a anya nke 20 cm ọ bụla ọzọ. Ya mere, n'ihi na otu onye n'akụkụ nke 25 mkpara chọrọ. Mgbe n'ọnụ nke efere Ogwe na-adịghị enịm, mgbe ahụ fọdụrụ 23.
Ugbu a, ebe ọ maara na ọnụ ọgụgụ nke ndị mkpara, ha ogologo pụrụ ịgbakọta. Ọ ga-kwuru na mkpara valves kwesịrị iru onu nke 20 cm, na, Ya mere, nke dabeere na ogologo nke efere, ogologo nke ọ bụla mkpanaka ga-460 cm. Transverse oyi akwa n'okpuru ọnọdụ na efere nwere a square udi ga-abụ otu. Ọzọkwa, anyị na gbakọọ ego nke mkwado chọrọ jikọọ ma zones.
Iche na anya n'etiti eriri 23 cm. Ke idaha otu njikọ n'etiti ha ga-a ogologo nke 25 cm, ebe ọ bụ na abụọ centimeters ahapụ na nfiksi. Dị otú ahụ webs ga na nke a 23 na ole, ebe ọ bụ na ha na-mere ke cell na nrutu nke ọ bụla mkwado eriri. Na ndị a data, anyị nwere ike gaba na ngụkọta oge site na iji usoro.
Oyiyi akwa maka warara ntọala
Warara ntọala na-eji ebe ọ na-adịghị oke n'ala siri ike kwesŽrŽ ewu a arọ ụlọ. Bụ ntọala nke ndị dị otú ahụ a teepu nke ihe ma ọ bụ mesikwuru ihe, nke na-erukwa tinyere dum perimeta nke ụlọ na n'okpuru isi ibu na-amị mgbidi. Mkwado ntọala na-emepụta na 2 zones, ma ekele na nkọwa ndị doro nke warara ntọala mkwado na ọ na-erepịakwa ukwuu na-erughị, na, n'ihi ya, ọ ga-eri na-erughị.
Okwu okirikiri nhọrọ ukwuu mkwado banyere otu dị ka slab ntọala. Naanị mkpara kwesịrị kwụsị na 30-40 cm si nkuku. Na onye ọ bụla i papuas ga na 2-4 cm akwado maka mkpanaka nke ya dị. Ngụkọta oge nke kwụ ọtọ jumpers rụrụ otu ụkpụrụ dị ka ngụkọta oge nke chọrọ ogologo mkwado maka slab ntọala.
Rịba ama na ma na mbụ na nke abụọ ikpe valves-aghaghị iwere na a oke nke dịkarịa ala 2,5 percent.